ဆိုင်ကယ်စီးမောင်းနှင်သူများ သိရှိစေရန် ( ၂၀၂၀ – ဥပဒေသစ် ) ပြဌာန်းချက်များထုတ်လိုက်ပါပီ – Na Pann San
ဆိုင်ကယ်စီးမောင်းနှင်သူများ သိရှိစေရန် ( ၂၀၂၀ – ဥပဒေသစ် ) ပြဌာန်းချက်များထုတ်လိုက်ပါပီ
Na Pann San W | June 28, 2020 | Local News | No Comments
ယာဉ်နံပါတ် မထင်ရှား = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၄-က)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၄ = ဒဏ်ငွေသုံးသိန်း. ထောင် သုံးလ။ အခြားနံပါတ်တပ် = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၄-ခ)။ အရေး ယူသည့် ပုဒ်မ-၉၄ = ဒဏ်ငွေ သုံးသိန်း.ထောင်သုံးလ ။ ယာဉ်နံ ပါတ်ပြား မတပ်= ကျူးလွန်သည့် ပုဒ်မ(၈၄-ဂ)။ အရေးယူသည့် ပုဒ်မ-၉၄ = ဒဏ်ငွေသုံးသိန်း. ထောင် သုံးလ ။
ဝှီးတက် သက်တမ်းကုန် = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၀)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၁ = ဒဏ်ငွေတစ်သိန်း. ထောင် တစ်လ။ ယဉ်မောင်းလိုင်စင်မရှိ = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၁-က)။အရေး ယူသည့်ပုဒ်မ-၉၁ = ဒဏ်ငွေတစ်သိန်း. ထောင် တစ်လ။ တခြားသူ ၏ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သုံး = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၁-ဂ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၁။ဒဏ်ငွေ တစ်သိန်း. ထောင် တစ်လ ။
ယာဉ်မဆင်မခြင်မောင်း =ကျူးလွန်သည့် ပုဒ်မ(၈၁-င)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ ၉၁ = ဒဏ်ငွေ တစ်သိန်း. ထောင် တစ်လ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးအရက်အမူးလွန်းမောင်း ပုဒ်မ(၈၁-ဇ)။ အရေးယူသည့် ပုဒ်မ ၉၁ = ဒဏ်ငွေ တစ်သိန်း. ထောင် တစ်လ ၊ ယဉ်မောင်းလိုင်စင်မပါ ပုဒ်မ(၇၅-က)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၈၆ = ဒဏ်ငွေ သုံးသောင်း။
ယဉ်မောင်း လိုင်စင်သက် တမ်းလွန် = ကျုးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၇၅-ဂ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ- ၈၆ = ဒဏ်ငွေ သုံးသောင်း။ မီးပိုတပ် = ကျုးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၇၅-ဆ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၈၆ = ဒဏ်ငွေ သုံးသောင်း။ ယာဉ်မောင်းစဉ်ဖုန်းအသုံးပြု = ကျုးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၇၅-ဋ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်-၈၆ = ဒဏ်ငွေသုံးသောင်း။
ဘက်မှန်မပါ = ကျူးလွန်သည့် ပုဒ်မ( ၇၆-က )။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ ၈၇ = ဒဏ်ငွေ သုံးသောင်း။ ရှေ့မီးအနိမ့်နေ့/ညဖွင့်မောင်းရန်ပျက်ကွက် = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၇၆-ခ)။အရေးယူသည့် ပုဒ်မ ၈၇ = ဒဏ်ငွေသုံးသောင်း။
ပါဝါအိတ်ဇောအသံထိန်းမပါ = ကျူးလွန်သည့် ပုဒ်မ(၇၆-က)။အရေးယူသည့်ပုဒ်မ ၈၇ = ဒဏ်ငွေ သုံးသောင်း။ ဦးထုပ်မဆောင်း =ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၇၆-ဂ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ ၈၇= ဒဏ်ငွေသုံးသောင်း ။တို့ဖြစ်သည် ။
သိထားတော့ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် နားလည် ထားတာပေါ့ ။ စေတနာဖြင့် အသိပေး၏ ။
ထိုင်းပြန်များ ထားရှိသည့် မြဝတီမြို့ Q စင်တာများတွင် လူ (၁၀၀) နီးပါး အစာ အဆိပ်သင့်မှုဖြစ်ပွား
ညသန်းခေါင်ကြီး ကားအက်ဆီးဒင့် ကြောင့် ကားကြီးထဲ ညပ်မိနေတဲ့ ကလေးငယ်ကို အချိန် ( ၃) နာရီခွဲကြာ ကြိုးစား ကယ်တင်ခဲ့ရ ( ရုပ်သံပါ )
မူဆယ်တော့ မိုးမီးလောင်ပြီ… လူနာ အမှတ် (၂၃၁) နဲ့ ထိတွေ့ခဲ့ သူ အလွန်များပြား ဟုဆို
ရန်ကုန် ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ Lockdown ဧရိယာအနီး အမည်မသိ အမျိုးသားတစ်ဦး သေဆုံးနေ